विशेष स्थलगत: अमेरिकाका २९ वटा जेलमा १ सय ११ नेपाली कैदिहरु | Canadian Reporters
किशोर पन्थी/ न्युयोर्क
५० लाख रुपैयाँसम्म खर्च गरेर मेक्सिकोको बाटो हुँदै हरेक दिनजसो नेपालीहरु गैरकानुनी रुपमा अमेरिका छिर्ने गर्छन् । जंगल, समुन्द्र र जेल हुँदै अमेरिकासम्मको यात्रा तय गर्ने क्रममा कतिपय नेपालीहरु जंगली जनावरको शिकार हुन्छन् । कतिपय समुन्द्रमा डुंगा डुबेर गोही र सार्कको शिकार हुन्छन् । कतिपय अमेरिका आउनु अगाडि नै अन्य देशमा पक्राउ परेर उतैबाट फर्काइन्छन् । यतिधेरै जोखिमका बीच पनि मेक्सिको हुँदै नेपालीहरु गैरकानुनी रुपमा अमेरिका छिर्ने क्रम घट्दो छैन, बरु बढ्दो छ ।
अमेरिकाको सिमाक्षेत्रबाट गैरकानुनी रुपमा छिर्ने क्रममा कैयन नेपालीहरु सिमा सुरक्षा बलको फन्दामा पर्छन् । त्यसपछि उनीहरुको जेलको यात्रा सुरु हुन्छ । कतिपय केही महिनापछि जेलबाट छुट्छन्, कतिपयलाई डिपोर्ट गरेर नेपाल फिर्ता पठाईन्छ । जेलबाट छुटेकाहरु मध्ये अधिकांश बाहिर निस्केपछि अमेरिका आउँदाको ऋण तिर्न हरेक दिन १२ देखि १४ घण्टासम्म र तीसै दिन काम गर्न बाध्य हुन्छन् । जेलबाट छुट्न नसकेर डिपोर्ट हुनेहरु आफ्नै अगाडि सपनामा आगो लागेको हेर्न बाध्य हुन्छन् ।
अमेरिकाका २९ वटा जेलमा नेपालीहरु
जुलाईको दोश्रो सातासम्मको अवस्था हेर्दा अमेरिकाका २९ वटा जेलमा नेपालीहरु अमेरिकी सपना सजाएर बसिरहेका छन् । अमेरिकामा युएस इमिग्रेशन एण्ड कस्टम इन्फोर्समेन्ट –आईस) को माताहतमा ८२ वटा अध्यागमन जेलहरु रहेका छन् । ती मध्ये हाल २९ वटा जेलमा नेपालीहरु रहेका छन् । उनीहरु आफू कहिले छुट्न पाईएला भन्दै दिन गनेर बसिरहेका छन् । क्यालिफोर्नियादेखि टेक्सास हुँदै न्युयोर्कसम्मका जेलमा कैयन नेपालीहरु अमेरिकी सपनालाई आफूसँगै कैद गरेर बसिरहेका छन् ।
लुजियानाको बेजाईलमा रहेको साउथ लुजियाना करेक्सनल सेन्टर, क्यालिफोर्नियामा रहेको एडालान्टो डिटेन्सन फेसिलिटी, न्युयोर्कको बटाभियामा रहेको बफेलो फेडेरल डिटेन्सन फेसिलिटी, एरिजोनाको फ्लोरेन्समा रहेको सेन्ट्रल एरिजोना डिटेन्सन सेन्टर, एरिजोनामा नै रहेको फ्लोरेन्स करेक्सनल सेन्टर, क्यालिफोर्नियाको सान डिएगोमा रहेको करेक्सन कर्पोरेशन अफ अमेरिका, कोलोराडोमा रहेको डेनभर कन्ट्राक्ट डिटेन्सन फेसिलिटी, न्युजर्सीको एलिजावेथमा रहेको एलिजाबेथ कन्ट्राक्ट डिटेन्सन फेसिलिटी, एरिजोनामा रहेको एलोय फेडेरल कन्ट्राक्ट फेसिलिटी, अलाबामा रहेको इटोहा काउन्टी जेल र टेक्सासको ह्युष्टन कन्ट्राक्ट डिटेन्सन फेसिलिटीमा नेपालीहरु जेल जीवन विताइरहेका छन् ।
त्यस्तै भर्जिनियाको फार्मभिल डिटेन्सन सेन्टर, क्यालिफोर्नियाको इम्पेरियल रिजनल एडल्ड डिटेन्सन फेसिलिटी, जर्जियाको अरविन काउन्टी डिटेन्सन सेन्टर, क्यालिफोर्नियाको जेम्स ए म्युसिक डिटेन्सन फेसिलिटी, लुजियानामा नै रहेको लास्सेल डिटेन्सन फेसिलिटी, टेक्सासमा रहेको लारेडो प्रोसेसिङ सेन्टर, क्यालिफोर्नियाको मेसा भर्ड डिटेन्सन फेसिलिटी, वासिंटनमा रहेको नर्थवेष्ट डिटेन्सन सेन्टर, पेन्सिलभेनियामा रहेको पाइक काउन्टी जेल, टेक्सासमा रहेको पोर्ट इशावेल डिटेन्सन सेन्टर, टेक्सासकै रोलिङ प्लेन डिटेन्सन सेन्टर, मिनासोटामा रहेको सेरवर्न काउन्टी जेल, टेक्सासमा रहेको साउथ टेक्सास डिटेन्सन कम्प्लेक्स, जर्जियाको स्टेवार्ड डिटेन्सन सेन्टर, क्यालिफोर्नियामा रहेको दियो लेसी फेसिलिटी, टेक्सासमा रहेको वेष्ट टेक्सास डिटेन्सन फेसिलिटी, मेरिल्याण्डको वेरसेस्टर जेल र पेन्सिलभेनियाको योर्क काउन्टी जेलमा ठूलो संख्यामा नेपालीहरु रहेका छन् ।
युएस इमिग्रेशन एण्ड कस्टम इन्फोर्समेन्ट (आईस)का प्रवक्ता भिन्सेन्ट पिकार्डले अमेरिकाका विभिन्न २९ वटा इमिग्रेशन जेलमा नेपालीहरु रहेको पुष्टी गर्दै भने– ‘हाम्रो रेकर्ड अनुशार हाल अमेरिकाका २९ वटा जेलमा नेपालीहरु रहेका छन् । कहिलेकाँही यो संख्यामा घटीबढी हुनसक्छ । जेल पर्नेहरुको संख्या थपिदै जाँदा र एउटा जेलबाट अर्को जेलमा सार्नुपर्ने अवस्था पनि आईरहने भएकाले कहिलेकाँही नेपालीहरु रहेको जेल संख्या थपिनसक्ने सम्भावना पनि रहन्छ । तर, मुख्यतया यीनै २९ वटा जेलहरुमा नेपालीहरु रहँदै आएका छन् ।’
टेक्सासमा रहेको पोर्ट इशावेल डिटेन्सन सेन्टर । टेक्सास क्षेत्रमा पक्राउ परेपछि अधिकांश नेपालीहरुलाई यहीं डिटेन्सन सेन्टरमा ल्याइन्छ । पछि उनीहरुलाई अन्य डिटेन्सन सेन्टरमा स्थानान्तरण गरिन्छ ।
कुन जेलमा कति छन् नेपाली ?
जुलाईको दोश्रो सातासम्मको अद्यावधिक विवरण अनुशार अमेरिकाका सबै अध्यागमन जेलमा रहेका नेपालीहरुको संख्या १ सय ११ रहेको छ । कहिलेकाँही हजारौं नेपालीहरु जेलमा रहेको प्रचारबाजी आउने गरे पनि त्यो प्रचारवाजी सत्य नरहेको विभिन्न इमिग्रेशन जेलको स्थलगत भ्रमण र युएस इमिग्रेशन एण्ड कस्टम इन्फोर्समेन्टले प्रदान गरेको अद्यावधिक तथ्यांकबाट पुष्टि भएको छ । युएस इमिग्रेशन एण्ड कस्टम इन्फोर्समेन्ट (आईस)का प्रवक्ता भिन्सेन्ट पिकार्डले हजारौं नेपाली जेलमा रहेको भन्ने प्रचारवाजी आफूले नसुनेको र त्यस्तो प्रचारवाजी भएको भए त्यो गलत रहेको जानकारी दिए ।
अमेरिकामा रहेका अध्यागमन जेलहरुमध्ये सबैभन्दा धेरै नेपालीहरु जर्जियाको जेलमा रहेका छन् । जर्जियाको स्टेवार्ड डिटेन्सन सेन्टरमा हाल २३ जना नेपालीहरुले बन्दी जीवन विताईरहेका छन् । टेक्सास र एरिजोना क्षेत्रमा सिमा पार गरेर आउने क्रममा धेरै नेपालीहरु पक्राउ पर्ने गरे पनि उनीहरुमध्ये कैयनलाई जर्जियाको डिटेन्सन सेन्टरमा स्थानान्तरण गरिंदै आएको छ । त्यस्तै जर्जियाको अरविन काउन्टी डिटेन्सन सेन्टरमा हाल एकजना नेपालीले बन्दी जीवन विताईरहेका छन् । यसरी जर्जियाका दुईवटा अध्यागमन जेलमा हाल २४ जना नेपालीहरु रहेका छन् ।
त्यस्तै टेक्सासका विभिन्न ६ वटा जेलहरुमा १९ जना नेपालीहरु रहेका छन् । टेक्सासको ह्युष्टन कन्ट्राक्ट डिटेन्सन फेसिलिटीमामा २ जना नेपालीहरु रहेका छन् भने लारेडो प्रोसेसिङ सेन्टरमा २ जना नेपालीहरु रहेका छन् । टेक्सासकै पोर्ट इशावेल डिटेन्सन सेन्टरमा ८ जना र टेक्सासकै रोलिङ प्लेन डिटेन्सन सेन्टरमा ४ जना नेपालीहरु रहेका छन् । त्यस्तै साउथ टेक्सास डिटेन्सन कम्प्लेक्समा २ जना र वेष्ट टेक्सास डिटेन्सन फेसिलिटीमा १ जना नेपाली रहेका छन् । स्थलगत भ्रमणका क्रममा जुलाईको पहिलो साता टेक्सासको पोर्ट इशावेल डिटेन्सन सेन्टरभित्र भेटिएका क्षेत्री थरका एकजना नेपालीले जेलभित्र ५ जना नेपालीहरु रहेको बताएका थिए । तर पछि अरु ३ जना नेपालीहरु थपिएपछि हाल त्यहाँ ८ जना नेपालीहरु रहेको युएस इमिग्रेशन एण्ड कस्टम इन्फोर्समेन्ट (आईस)ले पुष्टी गरेको छ ।
स्थलगत भ्रमणका क्रममा पोर्ट इशावेल डिटेन्सन सेन्टरमा खटिएका एकजना सरकारी अधिकारीले भने– ‘यो डिटेन्सन सेन्टरमा पहिले पहिले हरेक दिन तीनदेखि चारजनासम्म नेपालीहरुलाई ल्याइने गरेको रेकर्ड छ । तर यहाँबाट उनीहरुलाई अन्यत्रै सारिने र कैयन नेपालीहरु केही महिनाको बसाइपछि धरौटीमा छुट्ने भएकाले जेलभित्रै रहेका नेपालीहरु भने तुलानात्मक रुपमा कम छन् । नेपालको भूकम्पपछि भने यो डिटेन्सन सेन्टरमा कममात्र नेपालीलाई पक्राउ गरेर ल्याईएको छ । अब होमल्याण्ड सेक्युरिटीले नेपालीलाई टीपीएस सुविधा प्रदान गरेकाले जेलमा रहेकाहरुलाई समेत केही भए पनि राम्रो होला ।’
त्यस्तै क्यालिफोर्नियाका ६ वटा जेलमा ९ जना नेपालीहरु रहेका छन् । क्यालिफोर्नियामा रहेको एडालान्टो डिटेन्सन फेसिलिटीमा १ जना, क्यालिफोर्नियाको सान डिएगोमा रहेको करेक्सन कर्पोरेशन अफ अमेरिकामा १ जना, इम्पेरियल रिजनल एडल्ड डिटेन्सन फेसिलिटीमा ३ जना, जेम्स ए म्युसिक डिटेन्सन फेसिलिटीमा १ जना, मेसा भर्ड डिटेन्सन फेसिलिटीमा १ जना र दियो लेसी फेसिलिटीमा २ जना नेपालीहरु रहेका छन् । लुजियानाका २ वटा जेलमा ११ जना नेपालीहरु रहेका छन् । उनीहरुमध्ये अधिकांशलाई टेक्सासबाट स्थानान्तरण गरिएको हो । लुजियानाको बेजाइलमा रहेको साउथ लुजियाना करेक्सनल सेन्टरमा ५ जना र लुजियानामा नै रहेको लास्सेल डिटेन्सन फेसिलिटीमा ६ जना नेपालीहरु रहेका छन् ।
न्युयोर्कको बटाभियामा रहेको बफेलो फेडेरल डिटेन्सन फेसिलिटीमा भने अहिले २ जनामात्र नेपालीहरु रहेका छन् । उनीहरु पनि टेक्सास र एरिजोनाको जेलबाट स्थानान्तरण गरिएकाहरु हुन् । एरिजोनामा रहेका तीनवटा जेलहरुमा भने अहिले १६ जना नेपालीहरु रहेका छन् ।
एरिजोनाको फ्लोरेन्समा रहेको सेन्ट्रल एरिजोना डिटेन्सन सेन्टरमा १ जना, एरिजोनामा नै रहेको फ्लोरेन्स करेक्सनल सेन्टरमा ५ जना र एलोय फेडेरल कन्ट्राक्ट फेसिलिटीमा १० जना नेपालीहरु रहेका छन् । उल्लेख्य नेपालीहरु रहेको अर्को जेल अलाबामा रहेको इटोहा काउन्टी जेल हो, जसमा हाल ११ जना नेपालीहरु रहेका छन् ।
यी बाहेक कोलोराडोमा रहेको डेनभर कन्ट्राक्ट डिटेन्सन फेसिलिटीमा ५ जना, न्युजर्सीको एलिजावेथमा रहेको एलिजाबेथ कन्ट्राक्ट डिटेन्सन फेसिलिटीमा १ जना, भर्जिनियाको फार्मभिल डिटेन्सन सेन्टरमा १ जना, वासिंटनमा रहेको नर्थवेष्ट डिटेन्सन सेन्टरमा ६ जना, पेन्सिलभेनियामा रहेको पाइक काउन्टी जेलमा ३ जना, पेन्सिलभेनियाकै योर्क काउन्टी जेलमा १ जना, मिनासोटामा रहेको सेरवर्न काउन्टी जेलमा १ जना र मेरिल्याण्डको वेरसेस्टर जेलमा १ जना नेपाली रहेका छन् । उनीहरुमध्ये अधिकांश मेक्सिको हुँदै गैरकानुनी रुपमा अमेरिका छिर्न खोज्दा सिमाक्षेत्रमा पक्राउ पर्नेहरु रहेका छन् ।
अमेरिकाका विभिन्न राज्यमा रहेका ८२ वटा अध्यागमन जेलहरु । जसमध्ये हाल २९ वटा जेलमा नेपालीहरु रहेका छन् ।
जेलमा रहेकाहरुमध्ये ७ जना अपराधका मुद्दामा
अमेरिकामा २९ वटा जेलमा रहेका १ सय ११ जनामध्ये ७ जना आपराधिक कृयाकलापमा संलग्न भएका कारण डिपोर्टेशनको प्रकृयामा रहेकाहरु हुन् । उनीहरुले अमेरिकामा विभिन्न खाले जघन्य अपराध गरेका कारण क्रिमिनल कोर्टबाट सजायको फैसला पाईसकेपछि इमिग्रेशन कोर्टबाट डिपोर्टेशनको फैसला कुरेर बसिरहेका छन् । अपराधमा संलग्न भएपछि त्यो अपराध गरेको ठहर गर्दै क्रिमिनल कोर्टले फैसला गरिसकेपछि उनीहरुलाई अमेरिकी सरकारको इमिग्रेशन एण्ड कस्टम इन्फोर्समेन्ट (आईस)ले अनिवार्य डिपोर्टेशनको प्रकृयामा हालेको हो ।
यसरी अपराध गरेका कारण डिपोर्टेशनको प्रकृयामा जेलमा रहेका नेपालीहरुमध्ये गत जुनसम्म भर्जिनियाको जेलमा ३ जना रहेका थिए । जुलाई महिनामा २ जनालाई डिपोर्ट गरिसकिएकाले अहिले १ जनामात्र नेपाली भर्जिनियाको जेलमा रहेका छन् । त्यस्तै क्यालिफोर्नियाको जेलमा २ जना, एरिजोनाको एलोय फेडेरल कन्ट्राक्ट फेसिलिटीमामा १ जना, एटलान्टाको जेलमा १ जना, न्युयोर्कको बटाभियामा रहेको जेलमा १ जना र टेक्सासको ह्युस्टनमा रहेको जेलमा १ जना रहेका छन् । सन् २०१४ को अक्टोबरदेखि अहिलेसम्म अपराधका मुद्दामा अरु ७ जना नेपालीहरु डिपोर्ट भइसकेका छन् । डिपोर्ट हुनेहरुमा बोष्टनको जेलबाट १ जना, भर्जिनियाको जेलबाट २ जना, क्यालिफोर्नियाको जेलबाट १ जना, न्युयोर्कको जेलबाट १ जना, मिनासोटाको जेलबाट १ जना र टेक्सासको जेलबाट १ जना नेपाली रहेका छन् ।
एरिजोनाको फ्लोरेन्समा डिटेन्सन सेन्टरमा हिड्दै बन्दीहरु । फोटो : जोन मुर ।
जेल पर्ने नेपालीहरु जुनमा भन्दा जुलाईमा धेरै
अमेरिकाका केही जेलहरुमा जुन महिनाको तुलनामा जुलाईमा नेपालीहरु थपिएका छन् । क्यालिफोर्नियाको इम्पेरियल डिटेन्सन सेन्टरमा जुन महिनामा जम्मा २ जना नेपालीहरु रहेकोमा जुलाईमा त्यो संख्या ३ पुगेको छ । त्यस्तै टेक्सासको रोलिङ प्लेनमा जुन महिनामा जम्मा १ जना नेपाली जेलमा थिए तर अहिले अरु ३ जना थपिएर जेलमा हुने नेपालीहरुको संख्या ४ पुगेको छ । त्यस्तै टेक्सासको पोर्ट इशावेल डिटेन्सन सेन्टरमा पनि जुलाईको दोश्रो साता केही नेपाली थपिए, अहिले यो जेलमा रहेका नेपालीको संख्या ८ छ ।
त्यस्तै कोलोराडोमा रहेको जेलमा जुन महिनामा ४ जना नेपालीहरु रहेकोमा अहिले ५ जना छन् । लास्सेल डिटेन्सन सेन्टर लुजियानामा पनि जुनमा २ जना नेपालीहरु थिए, अहिले ६ जना नेपालीहरु रहेका छन् । त्यस्तै एरिजोनाको फ्लोरेन्स जेलमा जुनमा ४ जना नेपालीहरु रहेकोमा अहिले त्यो संख्या ५ पुगेको छ । जर्जियाको स्टेवार्टमा रहेको जेलमा जुन महिनामा जम्मा ६ जना नेपालीहरु थिए । अहिले अन्य जेलबाट नेपालीहरुलाई स्थानान्तरण गरेर त्यहाँ पुराईएकाले त्यहाँ रहेका नेपालीहरुको संख्या २३ पुगेको छ । त्यस्तै वासिंटनमा रहेको जेलमा जुन महिनामा ३ जना नेपालीहरु रहेकोमा अहिले यो संख्या ६ पुगेको छ ।
‘हिराशतमा खाना प्याक गर्ने कागज ओढेर भूईमै सुत्यौं’
सरोज अधिकारी क्षेत्री, अमेरिकी जेलमा बसेर छुटेका नेपाली
(बाग्लुङका सरोज अधिकारी क्षेत्री (नाम परिवर्तन) दलाललाई ३५ लाख रुपैयाँ बुझाएर मेक्सिकोको बाटो हुँदै अमेरिकामा आएका व्यक्ति हुन् । उनी मेक्सिकोबाट अमेरिका छिर्नासाथ टेक्सासमा पक्राउ परे । पक्राउ परेपछि उनलाई केहीदिन अस्थायी हिरासतमा राखियो । त्यसपछि उनलाई एकसाता टेक्सासको पोर्ट इशावेल डिटेन्सन सेन्टरमा राखियो । त्यसपछि उनलाई लुजियानाको लास्सेल डिटेन्सन सेन्टरमा सारियो । डिटेन्सन सेन्टरमा बस्दा उनको अनुभवबारे हामीले लामो कुराकानी गरेका थियौं । सोही कुराकानीको सम्पादित अंश ।)
मेक्सिकोबाट अमेरिका छिर्दा कसरी छिर्नुभयो ? र, कसरी पक्राउ पर्नुभयो ?
मेक्सिकोसम्म आइपुग्दा विभिन्न खालका समस्याहरु भोग्नुप¥यो । जंगलको बाटोदेखि समुन्द्रको बाटो हुँदै पनामामा जेलमासमेत बसियो । मेक्सिकोबाट अमेरिका छिर्ने क्रममा आ–आफ्नो दलालको सम्बन्ध अनुशार हुन्छ । कसैलाई यो जंगलको बाटो जानु भनेर छाडिदिन्छ । तर यदि आफ्नो दलालको त्यहाँका दलालसँग राम्रो सम्बन्ध छ भने सहज बाटोबाट अगाडि बढाउँछ । मेरो हकमा चाँही मलाई मेक्सिकोको रेनोसा भन्ने ठाउँमा केही दिन राख्यो । यो टेक्सास छिर्ने सिमाक्षेत्रमा पर्दो रहेछ । रेनोसाबाट गाडीमा १५ मिनेटजति जंगलैजंगल अगाडि ल्यायो । त्यसपछि केहीबेर पैदल नै हिड्यौं । अमेरिकाको सिमा क्षेत्रमा एउटा सानो खोला रहेछ । दलालले सानो डुंगामा राखेर त्यो खोला पनि पार गराईदियो । पारीपट्टी अमेरिकाको सिमा सुरक्षाकर्मीहरुले हेरिरहेका थिए । खोला तरेर अमेरिकी भूभागमा आइसकेपछि हामी सबैले दुबैहात माथि ठड्यायौं । त्यहाँ हामी ६ जना नेपालीहरु थियौं । २ जना भारतीयहरु थिए । त्यसपछि हामी सबैलाई अमेरिकी सुरक्षाकर्मीहरुले पक्राउ गरे । हेलिकप्टरहरु माथि आकाशमा घुमिरहेका थिए । सुरक्षाकर्मीहरुले नभाग्न आदेश दिईरहेका थिए । हामीलाई पक्राउ गरेपछि उनीहरुले गाडीमा राखे । त्यसपछि एउटा हिरासतमा लगेर राखे । सुरुमा हामीलाई अलिकति जुस र पाउरोटी खान दियो । हामीलाई त्यस्तो खालको हिरासत तीन दिनसम्म राख्यो । ती हिरासतमा हामीले दुई दिनसम्म खाना प्याक गर्ने कागज ओढेर भूईमै सुत्यौं । केही घण्टा एक ठाउँमा राख्ने, त्यसपछि अर्कै ठाउँमा लैजाने, एउटा रात एक ठाउँमा राख्ने, अर्को रात अर्कै ठाउँमा राख्ने ग¥यो । अब के होला भनेर हामी सबै निकै आत्तिएका थियौं । त्यसपछि हामीलाई पोर्ट इशावेल डिटेन्सन सेन्टरमा ल्याईयो ।
पोर्ट इशावेल डिटेन्सन सेन्टरमा कस्तो अवस्था रह्यो ?
पोर्ट इशावेल डिटेन्सन सेन्टरमा ल्याउनुअगाडि हामीसँग सामान्य सोधपुछ भयो । त्यसपछि हामीलाई त्यहाँ भित्र राख्यो । मलाई सात दिनसम्म त्यहाँ राख्यो । त्यहाँ अरु थुपै्र नेपालीहरु पनि थिएँ । हामीलाई तीन दिनसम्म राखेको हिरासतभन्दा यो डिटेन्सन सेन्टर अलिक व्यवस्थित रहेछ । लत्ताकपडा, खानबस्न सबै राम्रो रहेछ । सफा पनि रहेछ । त्यहाँ ७ दिन बस्दा मलाई त आराम गर्ने स्थल जस्तो बन्यो । अमेरिका छिर्नु अगाडि त्यत्रो जंगलको बाटोमा निकै दुःखकष्ट भोग्नुपरेको थियो । भोकभोकै हिड्नुपर्दा निकै कमजोर महशुस भईरहेको थियो । के होला, ज्यूँदै अमेरिका पुगिएला कि नपुगिएला भन्ने तनाव पनि थियो । तर, जेलमा नै राखे पनि अमेरिका त आईयो भनेर ढुक्क भईयो । मेक्सिकोबाट एकसाथ अमेरिका छिरेका हामी आठैजनालाई त्यहाँ ल्याएको थियो । बीचमा धेरै कुराहरुमा छानविन पनि ग¥यो । त्यो जेलमा हुँदा अमेरिकामा रहेका साथीहरु र नेपालमा भएका आफन्तसँग फोनमा कुराकानी पनि गरें । कसरी आएको किन आएको भनेर अन्तरवार्ता लियो । भित्र जेलमा परिसकेपछि आफ्नो वकिल भएको वा आफन्त अमेरिकामा भएको कुरा नगर्दा नै राम्रो हुने रहेछ । नजिकको नातेदार नभएको भने पनि कुनै संघसंस्थाहरुले छुटाउने रहेछ ।
त्यसपछि लुजियानाको जेलमा सरुवा गरिसकेपछि कस्तो अवस्था रह्यो ?
पोर्ट इशावेल डिटेन्सन सेन्टरबाट मलाई लुजियानामा रहेको जेलमा ल्यायो । टेक्सासमा स्थानाभाव भएको भन्दै मलाई जेल सरुवा गरेको थियो । प्लेनमार्फत लुजियानाको जेलमा ल्यायो । हातमा हतकडी र खुट्टामा नेल लगाएर जेल सरुवा गरिएको थियो । लुजियानाको लास्सेल डिटेन्सन सेन्टर अझ राम्रो रहेछ । बस्न, खान राम्रो सुविधा रहेछ । खेलकुदका लागि पनि व्यवस्था रहेछ । मैले लुजियानाको जेलमा धेरै स्वतन्त्रता महशुस गरें । मलाई झण्डै १ महिनासम्म त्यहाँ राख्यो । त्यो अवधिमा हामी जेलमा रहेकाहरुलाई पालैपालो बोलाएर अन्तरवार्ता लिइयो । त्यहाँका अफिसरहरु पनि धेरै राम्रा रहेछन् । मैले त्यहाँ अन्तरवार्ता दिंदा सबै कुरा बताएँ । अन्तरवार्तापछि मलाई विना धरौटी रकम रिहा गरियो ।
टेक्सास वा लुजियानाको जेलमा बस्दा अरु कस्ता नेपालीहरु भेट्नुभयो ?
टेक्सासमा बस्दा महिनौंदेखि जेलमा बसेका नेपालीहरु पनि भेट्यौं । टेक्सासको जेलमा बाग्लुङका छन्त्याल थरका एकजना नेपाली थिए । उनी दिनहुँ हामीसँग रुन्थे । उनको अन्तरवार्ता पनि बिग्रिएछ । उनलाई जिम्मा लिने भनेर अमेरिकामा रहेको एकजना व्यक्तिले आश्वासन दिएको रहेछ । अन्तरवार्ता पनि सबै भएछ । अफिसरले अमेरिकामा रहेका ती व्यक्तिलाई छन्त्यालको जिम्मा लिन्छस् भनेर सोधेछ । तर त्यो व्यक्तिले जिम्मा नलिने बताएछ । त्यसपछि उनको अन्तरवार्ता बिग्रिएछ । त्यसकारणले उनी जेलबाट छुट्न नसकेका रहेछन् । वकिल लगाउन पनि उनीसँग पैसा रहेनछ । घरको आर्थिक अवस्था पनि निकै कमजोर रहेछ । दलाललाई बुझाएको बीस बाइस लाख पनि सम्पत्ति बेचेर, धितो राखेर र ऋण खोजेर जुटाएका रहेछन् । त्यो भन्दा धेरै पैसा जुटाउने कुनै उपाय रहेनछ । पछि उनलाई अमेरिकामा रहेको एउटा संस्थाले छुटाउनका लागि सहयोग गरेको रहेछ । तर पनि उनी जेलभित्रै थिए । रुँदारुँदा उनका आँखा पनि सुन्निएका थिए । उनको भनाई अनुशार उनी त्यो जेलमा बसेको वर्ष दिनभन्दा पनि धेरै भएको रहेछ । कतिपय त दुई वर्षसम्म पनि बसेका रहेछन् । जेलमा उनीजस्ता नेपाली अरु पनि थिए । लुजियानाका जेलमा भने तीन चार महिनाभन्दा माथि नबसेका नेपालीहरु रहेका रहेछन् । ५ हजार डलरभन्दा धेरै धरौटी रकम बुझाउनु नपरेका नेपालीहरु लुजियानामा भेटिए ।
अमेरिकामा आउँदै गर्दा पनामामा समातिएका १६ नेपालीहरु (पहिलाे तस्विर) । पनामामा केहीदिन जेलमा बसेपछि उनीहरुलाई रिहा गरिन्छ । त्यसपछि फेरी उनीहरुले अमेरिकातिरको यात्रा तय गर्छन् । कोष्टारिका हुँदै अमेरिका आउन लागेका १९ जना नेपालीहरु ( दाेश्राे तस्विर ) । साथमा श्रीलंका र घानाका नागरिकहरु पनि ।
See more at: http://khasokhas.com/news/1109#sthash.OxbQDelt.dpuf
तपाईको पृथ्वी लाई चिन्नुस : येदी पृथ्वीमा सय जना (१००) बस्छन भने